Oromo News 06.22.21 | KWIT
U.S senate agriculture committee gabayaa horiidhan kan wal qabate akka laalan himan. Mormitoonni akka jedhanitti horsiistonni looni gabayaa walitti hin dhufneen waliin yeroo badaa akka qunnamaani jiru himan. Campany wan fooni gurguddaan 4 qalma percent 80% akka qabatanii jiran himan.
Akka gabaasa U.S.D.A midhaani mullisutti Iowa keessati midhaanirra akka dhiiban gahaa jiru hima. Gabaasni akka mullisutti sadarka boqqoolo percenta 56% irra kan jiruu yoo tau innis sadarkaa bareeda mullisa.soybeen ammo percent 57% yoo tau innis sadarkaa bareeda irra jira. Lachuu torbaan darbe irra gad xiqqaachu isaani mullisa.
Namni corona virus qabamu Nebraska keessati gaduma xiqaacha deemu jira. State keessati namni haarawa qabamu sadarka tokoffaa tauun baaye gad xiqqaachu jira. Lakkofsi kunis torbaan sadeetif walitti aane gadi bu’uu jira. C.D.C torbaan darbe keessa namni haarawa qabame nama 168 akka tae himan. Yeroo darbe keessa lakkoofsa baaye gad bu’aa kan argan yoo tau November keessa nama 17,000 qabamee akka ture himan.
Itti gaatamtoonni Monona County reefa kaluu kana laga Missouri kan Onawa, Iowa keessati darbamee argame tokkoo beekuf qorachuu jirani. Namni tokko kan aasa qabu tokko guyyaa Sunday seaati booda akka bakka sanitti argame ture himan.